PSG oo markan shiishka saaratay macallin Max Allegri – Gool FM
PSG oo markan shiishka saaratay macallin Max Allegri
Raage March 10, 2017
(Paris) 10 Maarso 2017 – Paris Saint-Germain ayaa sida lasoo werinayo waxay noqotay naadigii ugu dambeeyay ee xiise u muujiya macallinka Juventus ee Max Allegri maaddaama uu Unai Emery uu u muuqdo mid tegi doona bisha Juun.
Sida ku qoran L’Equipe, heshiiskii labada sano ahaa ee ay kooxdu xagaagii la gashay Emery ayaa lasoo gaabin doonaa marka uu fasalkani dhamaado, taasoo ay sabab u tahay guuldarradii bahdilka ahayd ee Barca ka gaartey.
Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in PSG ay bartilmaameedsan doonto midkood Allegri ama dhiggiisa Atletico Madrid ees Diego Simeone si ay u bedelaan macallinkii hore ee Sevilla, iyadoo Allegri, oo horay loola xiriirinayay Arsenal iyo Barca uu sanad uun ka harsan yahay qandaraaskiisa.
Milan oo magdhow 5 milyan ah ka bixisay garoonkii ay dhisanaysay!
GOOGOOSKA: Juventus vs AC Milan 2-1 (Juve oo ku badisay rigoore ay doodi ka taagan tahay)